नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ चैत २०७५)
कम्पनीले शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस शेयर र २३ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको फागुन १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव गरेपछि शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको छ । यो प्रस्ताव नियामक निकाय बीमा समिति र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ३९ करोड छ । २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि पूँजी रू. ५ अर्ब ४९ करोड पुग्नेछ । कम्पनीको ६१ दिनको कारोबार अवधिमा सबैभन्दा उच्च मूल्य रू. १ हजार १ सय ४० र न्यून मूल्य रू. १ हजार छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिसम्म ५ हजार ४८ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग र १ हजार ९ सय ८ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
2019-04-07 - 169 view(s) - abhiyan